HomeAfricaDrogba Oo Kabtan Looga Dhigay Xulka Ivory Coast Koobka Aduunka U Matalaya
Didier Drogba ayaa astaanka Kabtanka loo calaamadiyey, liiska tababaraha xulka qaranka Cote d’Ivoire, Sabri Lamouchi uu ku dhawaaqay inay wadankaasi uga qayb gallayaan tartanka koobka aduunka, oo ka kooban 28 ciyaaryahan, kuwaas oo uu sheegay inuu 2 laacibna ka daba keeni doono ka hor inta aanu sida rasmiga ah ugala dhex bixin 23 ka xidig ee Rasmiga ah.
Badi halyeyadii hore uga midka ahaa xulka Maroodiyaasha lagu naanayso ayaa ku jira liiskan uu Kabtanka u noqonayo Drogba, kaas oo aanay ka dhex muuqanin, xidiga ay Galatasaray u wada ciyaaraan ee Emmanuel Eboue iyo Tiene Siaka oo naadiga Faransiiska ah ee Montpellier ka mid ah, kuwaas oo sida tababaruhu sheegay uu uga tagay sababo la xidhiidha fayo qabkooda.
Gervinho, Salomon Kalou, Cheick Tiote iyo Labada walaalaha ah ee Yaya iyo Kolo Toure ayaa dhamaantood ku jira liiska uu daboolka ka qaaday tababare Lamouchi..
Xulka Ivery Coast ayaa is diyaarinta ku sii qaadan doona wadanka Maraykanka laga bilaabo May 20 ilaa laga gaadhayo June 6, mudadaas dhexdeedana ciyaaro saaxiibtinimo la kala ciyaari doona qaramada Bosnia oo ay qaabilayaan May 30 iyo xulka Salvador oo ay la leeyihiin June 4, markaas kadibna ka dagi doona wadanka Brazil.
Tababaraha Faransiiska ah ayaa cadeeyey inuu si weyn uga cabsi qabo xaalada caafimaad ee xidiga ugu waxtarka badan qaranka ee, Yaya Toure, iyo sidoo kale Drogba, oo ay dhaawacyo la soo darseen, laakiin carabka ku adkeeyey in labadaas ciyaaryahanba uu siin doono wakhti ay ku helaan nasasho fiican ka hor inta aanu tartanka Koobka aduunku bilaabmin.
Iyagoo Hormada C sidoo kale kula jira xulalka Colombia iyo Greece, Cote d’Ivoire waxay ciyaartooda ugu horeysa fooda is dari doonaan wadanka Japan, oo ah xulka Afraad ee ku weheliya Group C, kaas oo uu tababare Lamouchi sheegay in ciyaarta ugu adag ee ay sida weyn uga baqaha qabaan tahay kulanka Colombia, xulkan oo ku jira xulalka loo saadaalinayo inay koobka sanadkan qaadayaan.
Xulka Cote D’Ivoire Oo Dhamaystiranina waa Sidan:
Goolwadeyaasha: Barry Boubacar, Sylvain Gbohouo, Sayouba Mande, Badra Ali Sangare
Difaaca: Akpa Akpro, Serge Aurier, Arthur Boka, Viera Diarrassouba, Brice Dja Djedje, Kolo Toure, Didier Zokora, Sol Bamba, Benjamin Angoua
Dhexda: Serey Die, Ismael Diomande, Cheick Tiote, Yaya Toure, Didier Ya Konan, Constant Djakpa, Max-Alain Gradel
Afka Hore: Mathis Bolly, Wilfried Bony, Didier Drogba, Seydou Doumbia, Salomon Kalou, Giovanni Sio, Gervinho, Lacina Traore
Henderson Oo Qarka u Saaran Inuu Heshiis 5 Sanno ah Qallinka Ku Duugo